မသန္စြမ္း ထီသည္ထံမွ ထီအေစာင္ ၈၀ ကိုထိုးၿပီး ဂိတ္မွာ ပိုက္ဆံ က်န္ခဲ့လို႔ ေျပာၿပီး ထီလက္မွတ္မ်ား လိမ္ယူသြားတဲ့ ျဖစ္ရပ္ – Myanmar Update News
မသန္စြမ္း ထီသည္ထံမွ ထီ အေစာင္ ၈၀ ကိုထိုးၿပီး ဂိတ္မွာ ပိုက္ဆံ က်န္ခဲ့လို႔ ေျပာၿပီး ထီလက္မွတ္မ်ား လိမ္ယူသြားတဲ့ ျဖစ္ရပ္
ထီလက္မွတ္ သတိေပးခ်က္ ျဖစ္ပါသည္။ မသန္စြမ္း ထီသည္ ဦးမ်ိဳးမင္းသည္ ယေန႕ ၂၇. ၆. ၂၀၂၀ မနက္ ၉နာရီ ၁၀မိနစ္ အခ်ိန္ခန့္က ထီေရာင္း ခ်ရာ ထီထိုးသူ ကိုထြန္းသည္ ထီ အေစာင္ ၈၀ ကိုထိုးၿပီး ဂိတ္မွာ ပိုက္ဆံ က်န္ခဲ့လို႔ ေျပာၿပီး ထီမ်ား ယူသြားပါသည္ ထီေရာင္းသူသည္ ၃၀မိနစ္ ထိ ေစာင့္ေသာလည္း ျပန္မလာပါ။
ထိုေၾကာင့္ ယခု ေဖာ္ျပပါ ထီလက္မွတ္ ဂဏန္း နံပတ္မ်ားကို ထီထိုးသူမ်ား မထိုးမီေစရန္ အသိေပးအပ္ပသည္။ ယခု ထီလက္မွတ္ ကိစၥ လိမ္လည္သူကို သက္ ဆိုင္ရာမွာ တိုင္းၾကား ထားပါသည္။
ထိုထီမ်ား ေပါက္မေပါက္ သိရေအာင္ ေမာ္ဒယ္ထီ ေပါက္စဥ္ apkမွာ ထီတိုက္ရန္ စာရင္း သြင္းထားပါ သည္ ထီေပါက္သည့္ နံပတ္မ်ား ထပ္မံ ေပၚေပါက္ပါက ထိုလက္မွတ္မ်ားကို မည္သည့္ ထီဆိုင္မွာ ဆုေငြ မထုတ္ေပးရန္ ထပ္မံ အသိေပးပါမည္။
ထီလက္မွတ္ အျပည့္အစုံမွာ ေအာက္ပါ အတိုင္း ျဖစ္ပါသည္။ (၁၇)ႀကိမ္ေျမာက္ ထီလက္မွတ္
ဋ ဌ ဍ ဎ ဏ တ ထ ဒ ဓ န ၂၂၈၄၉၆ / ထ ဒ ဓ န ပ ဖ ဗ ဘ မ ယ ၈၇၆၅၂၆/ ည ဋ ဌ ဍ ဎ ဏ တ ထ ဒ ဓ ၈၆၄၁၄၆ /က ခ ဂ ဃ င စ ဆ ဇ စ ည ၆၃၁၇၁၂/ ည ဋ ဌ ဍ ဎ ၇၈၅၈၉၇/ မ ယ ရ လ ဝ ၂၃၄၇၂၉/ ကခ ကဂ ကဃ ကင ကစ ၂၆၄၇၇၉/ဘ မ ယ ရ လ ၉၉၀၂၀၈/ ယ ရ လ ဝ သ ၅၇၁၉၂၈ ကခ ကဂ ကဃ ကင ကစ ၉၉၀၂၀၆ / ဋ ဌ ဍ ဎ ဏ ၈၅၈၂၄၃/ ည ဋ ဌ ဍ ဎ ၆၁၆၈၄၀
ထီေရာင္းသူ ဖုန္းနံပတ္ ၀၉ ၇၉၈၆၆၃၁၆၉ ထီထိုးသူ ဖုန္းနံပတ္ ၀၉ ၇၇၀၅၅၉၈၀၁ #ထီေပါက္စဥ္
(Unicode version) မသန်စွမ်း ထီသည်ထံမှ ထီ အစောင် ၈၀ ကိုထိုးပြီး ဂိတ်မှာ ပိုက်ဆံ ကျန်ခဲ့လို့ ပြောပြီး ထီလက်မှတ်များ လိမ်ယူသွားတဲ့ ဖြစ် ရပ်
ထီလက်မှတ် သတိပေးချက် ဖြစ်ပါသည်။ မသန် စွမ်း ထီသည် ဦးမျိုးမင်းသည် ယနေ့ ၂၇. ၆. ၂၀၂၀ မနက် ၉နာရီ ၁၀မိနစ် အချိန်ခန့်က ထီရောင်းချရာ ထီထိုးသူ ကိုထွန်းသည် ထီအစောင် ၈၀ ကိုထိုးပြီး ဂိတ်မှာ ပိုက်ဆံ ကျန်ခဲ့လို့ ပြောပြီး ထီများ ယူသွားပါသည် ထီရောင်းသူသည် ၃၀ မိနစ် ထိ စောင့်သောလည်း ပြန်မလာပါ။
ထိုကြောင့် ယခု ဖော်ပြပါ ထီလက်မှတ် ဂဏန်း နံပတ်များကို ထီထိုးသူများ မထိုးမီစေရန် အသိ ပေးအပ်ပသည်။ ယခု ထီလက်မှတ် ကိစ္စ လိမ် လည်သူကို သက် ဆိုင်ရာမှာ တိုင်းကြား ထားပါသည်။
ထိုထီများ ပေါက်မပေါက် သိရအောင် မော်ဒယ်ထီ ပေါက်စဉ် apkမှာ ထီတိုက်ရန် စာရင်း သွင်းထားပါ သည် ထီပေါက်သည့် နံပတ်များ ထပ်မံ ပေါ်ပေါက်ပါက ထိုလက်မှတ်များကို မည်သည့် ထီဆိုင်မှာ ဆုငွေ မထုတ်ပေးရန် ထပ်မံ အသိပေးပါမည်။
ထီလက်မှတ် အပြည့်အစုံမှာ အောက်ပါ အတိုင်း ဖြစ်ပါသည်။ (၁၇)ကြိမ်မြောက် ထီလက်မှတ်
ဋ ဌ ဍ ဎ ဏ တ ထ ဒ ဓ န ၂၂၈၄၉၆ / ထ ဒ ဓ န ပ ဖ ဗ ဘ မ ယ ၈၇၆၅၂၆/ ည ဋ ဌ ဍ ဎ ဏ တ ထ ဒ ဓ ၈၆၄၁၄၆ /က ခ ဂ ဃ င စ ဆ ဇ စ ည ၆၃၁၇၁၂/ ည ဋ ဌ ဍ ဎ ၇၈၅၈၉၇/ မ ယ ရ လ ဝ ၂၃၄၇၂၉/ ကခ ကဂ ကဃ ကင ကစ ၂၆၄၇၇၉/ဘ မ ယ ရ လ ၉၉၀၂၀၈/ ယ ရ လ ဝ သ ၅၇၁၉၂၈ / ကခ ကဂ ကဃ ကင ကစ ၉၉၀၂၀၆ / ဋ ဌ ဍ ဎ ဏ ၈၅၈၂၄၃/ ည ဋ ဌ ဍ ဎ ၆၁၆၈၄၀
ထီရောင်းသူ ဖုန်းနံပတ် ၀၉ ၇၉၈၆၆၃၁၆၉ ထီထိုးသူ ဖုန်းနံပတ် ၀၉ ၇၇၀၅၅၉၈၀၁ #ထီပေါက်စဉ်